भेट्न अाउनुस् काठमाडाैँ लाने दुःख गर्नुपर्दैन- डा. केसी | mulkhabar.com
भेट्न अाउनुस् काठमाडाैँ लाने दुःख गर्नुपर्दैन- डा. केसी
July 12, 2018 | 9:42 am 197 Hits
काठमाडौं २८ असार ।
१२ दिनदेखि अनसनरत डा. गाेविन्द केसीलार्इ लिन बुधबार काठमाडाैँबाट चिकित्सककाे टाेली जुम्ला जाने तयारी थियाे । तर उड्ने तयारीमा रहेकाे हेलिकप्टर काठमाडाैँमा राेकियाे । डा. गाेविन्द केसीले अाफु काठमाडाैँ नफर्किने जवाफ दिएपछि सरकारले पठाउन लागेकाे टाेली काठमाडाैँमा नै राेकिएकाे हाे । उने भने म अहिले काठमाडाैँ अाउने पक्षमा छैन मलार्इ हेर्न अाउने भए ठिक छ ।
अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ,अनसनरत डा. गाेविन्द केसीले भन्नुभयाे लिनकै लागि हाे भने दुःख नगरे हुन्छ । काठमाडाैँ फर्केर वार्ता गर्दिनँ । कर्णालीकाे जनताका यहाँ अाएकाे हुँ । काठमाडाैँ गएर वार्ता गर्दा कर्णालीका जनताकाे अपमान हुन्छ । सरकार वार्ता र सम्वाद गर्न चाहाने भए जुम्लामै अाउनु पर्छ ।
म तयार छु । वार्ता टाेलीविना चिकित्सकहरू अाउनुकाे कुनै अर्थ छैन । म अचेत नहुदा सम्म जुम्लामै बस्छु । मलार्इ काठमाडाैँ लैजान भन्दा तिन कराेड नागरिककाे हकमा चिकित्सा शिक्षा र उपचार व्यवस्था सधार्ने काम गर्नुहाेस उहाँकाे भनार्इ थियाे ।